Sakafo Shinoa fitsaboana - Shijiazhuang Yiling Hospital
Sakafo sinoa fitsaboana (antsoina koa hoe ny sakafo sy ny sakafo fitsaboana fitsaboana) dia fomba amin'ny resaka sakafo finoana miorim-paka ao Shinoa momba ny vokatry ny sakafo eo amin'ny vatan'olombelona, ​​ary mifantoka amin'ny foto-kevitra toy ny mihinana araka ny antonony. Ny fitsipika fototra dia fifangaroana ny vako-drazana sy ny foto-kevitra hevitra nalaina avy fitsaboana nentim-paharazana sinoa.
Food fitsaboana efa hatramin'ny ela ny fomba mahazatra ny fahasalamana eo amin'ny olona.
Diet ho toy ny ampahany manan-danja indrindra eo amin'ny fiainana, amin'ny ankapobeny, vokany amin'ny fahasalamana. Fa ny olona voan'ny aretina, sakafo zava-dehibe kokoa. Fa ny marary, ny sakafo isan'andro mikendry fanatsarana ara-batana salama, raha fanitsiana ny vatana, ka ny vatana dia azo indray somary fanjakana ara-pahasalamana raha vao araka izay azo atao, mba hahazoana fitsaboana tsara kokoa vokany.
Sakafo Shinoa fitsaboana Be vokany eo amin'ny fitsaboana kansera, scleroderma, hozatra atrophy, rheumatism, maotera neuron aretina, aretin-kozatra, diabeta, nephropathy, sy ny karazana aretina mitaiza sy ny tranga mafy.
Manontany manam-pahaizana manokana ho an'ny fanontaniana manokana.